Udizili ugesi namuhla bathole ukusatshalaliswa yazo ebanzi ezindaweni lapho kungekho khona wehlisa eyodwa ugesi noma izinga layo pretty ongaphakeme. Indima eyinhloko injini e imishini enjalo ukhonza i yangaphakathi omlilo engine, nophethiloli ukuthungela inikezwa yi emoyeni onomfutho. Phakathi omlilo of amandla fuel uguqulwe ukushisa futhi amandla mechanical, okuyinto ethatha ku kushaft ekukhiqizeni amandla okwalandela.
Ngo zinsizakuphila zisebenzisa engabizi futhi asalile uwoyela nophethiloli. Buhle lokubolekwa enjalo kushesha payback isikhathi, ngesivinini injini, kulula ukuqala futhi isitoreji ukuphepha. Ngakho, lapho usebenza imishini enjalo yenza umsindo omncane futhi okuhlala isikhathi eside ukwedlula uphethiloli nozakwabo. Uma unesithakazelo 100 kW udizili generator ke ungase ucabangele onobuhle eziningana, ufunde izibuyekezo ngazo futhi ukufunda ezibekiweko lobuchwepheshe kuyokusiza ukuba wenze isinqumo esifanele.
Model Incazelo TCC DSU BP-ema-100-113162 T400-1RPM11
Lokhu imishini uhlobo amandla professional, okuvumela ukuba bathole amandla kagesi amadivayisi ahlukahlukene. Idivayisi isetshenziswa njengoba main umthombo wamandla kulezo zindawo lapho kukhona awekho amandla umile, lapha zihlanganisa amakhaya iholide kanye zokwakha.
Lokhu generator 100 kW udizili angasebenza futhi njengoba amandla umthombo isipele uma kukhona isidingo ugesi e amabhizinisi ezinkulu lapho kuyadingeka ukuba ngakususi elula ukukhiqiza. Imishini has a digital control unit kanye ne-microprocessor ukumisa kanye nokuqapha lula lokhiye yokusebenza nemingcele.
izici Technical imodeli
Umklamo ine kagesi kanye namadivayisi ifinyelela amandla esiphezulu 110 kW. Isisetshenziswa ifakwe uphethiloli, ogama umthamo 212 amalitha. Leli bhokisi is hhayi ifakwe izibambo namasondo ezingase lula zokuhamba. Ethangini amafutha has a umthamo okulingana 16.4 amalitha.
Nge ibhethri ifakiwe. Kubalulekile ukucabangela ngaphambi kokuthenga izilinganiso izindlu ezakha 3230 x 1140 x 1750 mm. I-fuel kudliwe ngesikhatsi operation in a ivolumu 24 l / h. Lapho abathengi kubhekwe kW asebenzayo udizili generator 100, zinaka ipharamitha ezifana nenani linemibhikisho ngomzuzu, kulesi simo kungasethiwe 1500. Inkomba fuel level. Isisetshenziswa ukala 2000 kg. Kuyinto engenakwenzeka hhayi ukwaba inketho ezengeziwe, indima okuyinto imishini elawulwa.
Uma ucabangela amandla ngenhla, kufanele sinake izici zako ezisemqoka. Phakathi kwalezi abathengi bathi:
umsebenzi ukuvikela izingxenye zangaphakathi;
ukufinyelela okusheshayo uhlelo;
ukulawula elula futhi ukulungiswa.
izingxenye Yangaphakathi ivikelwe bezinhlamvu metal, okuyinto kuvimbela umonakalo. Ukuze onguchwepheshe uhlelo bazokwazi ukuthola ukufinyelela okusheshayo, okuyinto lula sibonga iminyango. Abathengi ikakhulukazi ukugcizelela ezingeni eliphansi vibration, lesi sici olunikezwa vibration dampers. Abathengi efana xaxa kanye nesibopho umjikelezo, it is okuqinisekisiwe fuel ithangi capacious, esinikela umsebenzi isikhathi eside ngaphandle refueling.
Lokhu generator 100 kW udizili kungase sizikhandle silungiselelwe futhi kulawulwa control panel nge isibonisi kanye ne-microprocessor. Izinzuzo engeziwe yabathengi cabanga:
H ekilasini ukwahlukanisa;
ukutholakala izingxenye ezisele;
khona uketshezi Ukupholisa uhlelo;
kungenzeka retrofitting okuzenzakalelayo ekuqaleni-up;
kungenzeka kokufaka kwe-heater uwoyela.
Incazelo generator diesel TCC BP-ema-100-000199 T400-2RM19
Kulesi siteshi libhekene ongaphakeme petrol futhi kulula ukuyinakekela. Iyehla iyenyuka damped ezihlalweni Damping, okuyinto bandise nokuphila imishini. Kudivayisi angasebenzisa njengoba unomphela noma eziphuthumayo amandla umthombo ngaphansi kwezimo zezakhiwo. Ukuba khona ukuziqalela kagesi kwikhithi kube lula ukuqala yenjini.
Okungenhla-echazwe udizili generator 100 kW, intengo okuyinto ruble 73 7600., Inikeza amandla esiphezulu 125 kW. Umklamo has a uphethiloli 245 amalitha. Okokhelekayo ezingeni inkomba kudivayisi alikho. Udizili ukusetshenziswa siyagcinwa uhla 20 l / h. Ukuze ukuxazulula, lapho esiteshini itholakala, udinga ukuba banake usayizi, zingabantu 2250 x 820 x 1420 mm. Ngo kokuhlinzwa, lezi amadivaysi ihlaba umkhosi umsindo ezingeni 82 dB. Isici omuhle futhi ukutholakala amabhethri kwikhithi, kodwa izibambo futhi amasondo design akukho. Generator ukala 1350 kg.
Udizili ugesi 100 kW, imbangela yenkinga okuzokwenziwa kuchaziwe ngezansi, asetshenziselwa yonke indawo namuhla. Kodwa ngisho noma imishini isezingeni eliphakeme, ke kungalimala. Lokhu kwenzeka ngenxa yokulungiswa okungafanele noma zife, ukusebenza amaphutha, okungabangelwa ngokuntuleka abathengi oqeqeshiwe.
Ngezinye izikhathi izinkinga ezibangelwa fuel izinhlelo usebenzisa ukhwaliti ongaphakeme nophethiloli. Ngenxa yalokho, ungase abhekane neqiniso lokuthi generator diesel 100 kW, kungenzeka umane ungaqali. Ngezinye izikhathi isakhiwo elingenalo uphawu izindlu, ukwahlukanisa nokushaya komoya, ezinomthelela ukusebenza ngemfanelo kohlelo. Ngenxa yalokho, yezingxenye esemqoka kungaba overheat. Ngokuphathelene lokushisa ongaphakeme, banengxenye okokuqandisa amayunithi eziyisisekelo, kuyilapho umswakama high kuholela ukuthungela wiring.
Udizili generator 100 kW b / u ungathenga i ruble 350 000. Yize kunjalo, uma unquma ukuthenga isiteshi esisha, usengakwazi banake imodeli TCC BP-ema-100-T400-1RPM13 PKP 000221. Kuyinto olukwazi ukuhlinzeka umsebenzi kagesi, umthamo ingqikithi kuze kufinyelele 110 kW. operation esitebeleni kuleli cala olunikezwa injini diesel, okuyinto kungenzeka ngisho at umthwalo esiphezulu.
Izimo ababesebenza kuzo imishini kuyathuthuka sibonga ebiyelwe umsindo. Phelelisa izimbobo uhlelo isenzo okusamanzi okungaphathwa ukunikeza Ukupholisa ephumelelayo ISIZINDA yangaphakathi. Lokhu generator diesel 100 kW, ukugeleza izinga uphethiloli okuyinto 19,6 l / h, ine uhlobo idivayisi umile enesisindo 1930 kg.
Sanibonani zivela eFrance: eclairs ekhaya